Tabaruc - Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka | Cusbooneysii. Dhiirrigeli. Excel.
Mutadawiciinta Minnewashta waxbay ka badalaan!
Raadi fursado mutadawiciin ah oo is bedbeddela - fiidkii, sabtida iyo axadaha iyo maalmaha shaqada - ee ku habboon jadwalkaaga oo dhisaya bulshada dhexdeeda dugsigeenna Ka fiiri liistada Guddiga PTO ee fursadaha jira.
Waxaan jecel nahay inaan kaa maqalno. La xiriir VCMinnewashta@gmail.com si aad u hesho riyadaada iskaa wax u qabso ah ama guji Shaxda Ururada ee hoose si aad wax badan uga ogaato boos kasta.
Waxaan ku faraxsanahay inaan helno caawimaad, taageero iyo joogitaanka waalidkeen iskaa wax u qabso. Si loo helo jawi nabdoon, oo carruurtu ay yihiin ahmiyadeena koowaad, waxaan u baahanahay inaan raacno nidaamyada soo socda:
Nidaamka hubinta: Waa lagama maarmaan in dhammaan mutadawiciinta dhismaha ay soo galaan oo ay isticmaalaan calaamadaha booqdaha ee iskuulku bixiyo.
Qarsoodiga: Barayaashu waxay aqoonsadaan muhiimadda qarsoodiga. Qof kastaa wuu ku ammaan badan yahay jawiga lagu ilaaliyo asturnaanta ilmaha iyo qoyska ilmaha. Waxaan ka rajeyneynaa isla ballanqaadka qarsoodiga ee mutadawiciinteenna sida aan annaguba nafteenna uga sugno.
KA SHAQAYNTA QOLKA
Waalidiinta waxaa lagu dhiirigelinayaa inay iskaa wax u qabso ugu shaqeeyaan fasalka carruurtooda. Macallimiintu waxay sida caadiga ah heli doonaan fursado mutadawacnimo oo fasal ah oo laga heli karo Habeenka Manhajka isla markaana waxay la soo xiriiri doonaan baahiyaha kale ee iskaa wax u qabso sannadka oo dhan.
FURSADAHA ISTICMAALKA - PTO
Waxaan leenahay dhaqan adag oo tabaruc ah Dugsiga Hoose ee Minnewashta. Waalidiinta, dadka ardayda masuulka ka ah, iyo xubnaha qoysku waxay ku lug leeyihiin qaybo badan oo ka mid ah waxbarashada carruurteenna. Waxaan rajeyneynaa in waalid walba heli karo ugu yaraan hal dariiqo oo uu ku caawiyo sannad kasta. Dhamaan fursadaha iskaa wax u qabso ee PTO (oo leh sharraxaad) waxaa lagu dhajiyay websaydhka bilawga sanad dugsiyeed kasta. Waad heli kartaa oo aad iska qori kartaa fursadahaas sanadka oo dhan. Kumbuyuutarro ayaa loo dejiyey hoolka dugsiga inta lagu jiro Habeennada Manhajka si aad ugu isticmaasho inaad isqorto, sidoo kale. Sanadka oo dhan, guddiyo kaladuwan ayaa sidoo kale qaybin kara foomamka codsi iskaa wax u qabso ah.
Macluumaad Dheeraad ah iyo Kheyraad